Memory ကောင်းဖို့ လမ်းလျှောက်စို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Memory ကောင်းဖို့ လမ်းလျှောက်စို့
Memory ကောင်းဖို့ လမ်းလျှောက်စို့
Posted by Zaw Wonna on Oct 28, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |3comments
အသက် ၅၅ နှစ်ကျော်အရွယ် အမေရိကန် နိုင်ငံသားတို့အနေဖြင့် မှတ်ဥာဏ်ယိုယွင်း ကျဆင်းခြင်းကို စိုးရိမ်မှု ကြီးမားနေကြသည်။ အယ်လ်ဇိုင်းမား ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့၏ အဆိုအရ လူဦးရေ ၄ သန်းကျော်သည် အယ်လ်ဇိုင်းမား ရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရပြီး ၄င်းအရေအတွက်သည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်သို့ ရောက်ရှိလျှင် ၄ ဆခန့် တိုးပွားလာဖွယ်ရာ ရှိသောကြောင့် ထိုသို့စိုးရိမ်မှုကို နားလည်သင့်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဦးနှောက်၏ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည် တိုးတက်မြင့်မားစေနိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာရောင်းချသော ဆေးဝါးများသည် ဈေးကွက်တွင် အလျှံပယ် ဖြစ်လျှက်ရှိသည်။
ဆုဒိုကုနှင့် စကားလုံးဥာဏ်စမ်း ကစားနည်းများသည် မှတ်ဥာဏ်ကို တိုးတက်စေသည်ဟု ပြောဆိုမှုများ ရှိသော်လည်း ဝေဖန်သူများကမူ ထိုဥာဏ်စမ်းများကို ကစားနေချိန်တွင်သာ တိုးတက်မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ မှတ်ဥာဏ်ယိုယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ဆိုသော အသီးအရွက် ဓါတ်စာများမှာလည်း များသောအားဖြင့် အထောက်အထား အခိုင်အမာ မရှိလှပေ။
သင့်အနေနှင့် အလေးမ လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပေ။ Erickson နှင့် သူ၏အဖွဲ့သည် အသက်ကြီးရင့်သူ အယောက် ၃၀၀ အား ၁၃ နှစ်ကြာ လေ့လာစောင့်ကြည့် ခဲ့ကြသည်။ ထိုလေ့လာချက်အရ အလုပ်သဘောအရ ဖြစ်စေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းအနေနှင့် ဖြစ်စေ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၆ မိုင်မှ ၉ မိုင်အထိ ပုံမှန် လမ်းလျှောက်လေ့ ရှိသူများသည် လမ်းမလျှောက်သူများထက် မှတ်ဥာဏ်ယိုယွင်းမှုနှုန်း ထက်ဝက်ခန့် နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း
လုပ်ခြင်းသည် ဦးနှောက်၏ အခြေခံ လုပ်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်စေနိုင်ကြောင်း၊ ဆဲလ်အသစ်များ ပွားများမှုနှင့်
သင်ကြားလေ့လာမှုနှင့် မှတ်ဥာဏ်နှင့်ဆိုင်သော ကလာပ်စည်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးတက်စေကြောင်း Erickson က
ယခုနှစ်ဦးပိုင်းတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် အခြားသော လေ့လာမှု တစ်ခုတွင်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အမှန်တကယ် အထောက်အကူပြုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဦးနှောက်ဆဲလ် များသာမက မှတ်ဥာဏ်များ ခွဲခြားခြင်းကို အထောက်အကူပြုသည့် ဆဲလ်အသစ်များကိုပါ ပိုမို ထုတ်လုပ်စေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဆရာဝန်များ၏ အကြံပေးချက်အရ အိုမီဂါ ဖက်တီးအက်ဆစ် ပါဝင်သော အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းဖြင့်လည်း အသက်အရွယ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ဦးနှောက်ယိုယွင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ဆဲလ်မွန် အမျိုးအစားဝင် ငါးများကို တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် စားသုံးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက် တစ်ရှုးများနှင့် နာ့ဗ်ဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အထောက်အကူပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ငါးနှင့် အသီးအရွက်များကို မျှတစွာ စားသုံးခြင်းဖြင့် မှတ်ဥာဏ်ကျဆင်းမှုကို
Memory loss is the single biggest fear for Americans over the age of 55. And it’s understandable: over4million currently suffer from Alzheimer’s disease, and those numbers are expected to quadruple by 2050, according to the Alzheimer’s Foundation. . . . . . . . . . .
Source Article: Yahoo, The number one way to improve your memory
by Piper Weiss, Shine Staff on Wed Oct 20, 2010.
စရိတ်စက အသက်သာဆုံး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပါပဲ..။
သူငယ်ပြန်တာကို သိပ်သတိမထားမိကြတဲ့ မြန်မာအဖိူးအဖွားတွေ … လုပ်သင့်ပါတယ်.။
တတိယအရွယ်မှာ … အိမ်မှာနေပြီး ပုတီထိုင်စိတ်နေတာထက်စာ၇င် ဘုရားသွားကျောင်းတက် ကပိုအဆင်ပြေမဲ့ပုံပါပဲ..။
ရန်ကုန်က အထပ်မြင့် တိုက်ခန်းတွေမှာ နေကြရတဲ့ လူကြီးပိုင်းတွေဆိုရင် တော်တော်လေးကို သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဓါတ်လှေခါး မရှိတော့ အောက်ကိုဆင်းဖို့ တက်ဖို့က ခက်ပြန်ရော။ လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့က သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ အဲလိုနဲ့ တီဗွီရှေ့မှာပဲ တနေကုန် ထိုင်နေကြရတယ်။ တကယ်တမ်း သူငယ်ပြန်တဲ့ အဆင့် ရောက်သွားရင် စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မိသားစုအတွက်လည်း အခက်အခဲ အရမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစကားမှာ “ငရဲလို၊ လူအိုမွေး ဆိုတာ ရှိပါတယ်” ။ တကယ် ကြုံဖူးမှ ဘယ်လောက် စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။
လူအိုမမွေးဘဲ ပြစ်ထားတော့လည်း ဘယ်ကောင်းမလဲ ဆရာ ဇ၀န ရဲ့..
အမှန်တော့ ကိုယ်တိုင် လုပ်ချင်စိတ်ရှိမှ ဖြစ်တာပါ.. အသက်ကြီးလို့ လမ်းလျောက်ပါပြောရင်.. နင်တို့ကို ငါတို့က ငယ်ငယ်တည်းက ဆုံးမလာတာ.. ငါပေးတဲ့ အသိနဲ့ ကြီးလာပြီး ဆရာ လာမလုပ်နဲ့ မာန်တက်နေတဲ့ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေလည်း ရှိတတ်ပါသည်။
အမှန်တော့ အဘိုးအဘွား အများစုက မြေးထိန်းပြီး အလုပ်ရှုပ်နေကြတာ များတယ်.. မြေးငယ်လျောက်ပြေးတဲ့ နောက်လိုက်နေတဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွား ကျန်းမာ နေတယ်…